नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा सभामा क–कसलाई छ निम्ता ? | Nayashaktionline.com-No.1 News portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment,Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview, International News, Local News, Nepal News, All News, Total News, News, News of Nepal, Our Nepal, Every News, Bhaktapur, Kathmandu, Lalitpur All Nepal
Home राजनीति नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा सभामा क–कसलाई छ निम्ता ?
नयाँ शक्ति पार्टी घोषणा सभामा क–कसलाई छ निम्ता ?
काठमाडौं, । नयाँ शक्ति नेपालले जेठ ३० गते काठमाडौंको दशरथ रंगशालामा हुने पार्टी घोषणामा देश तथा विदेशबाट नयाँ शक्तिका संस्थापक र अतिथिहरु सहभागी हुने भएका छन् । एक लाख भन्दा बढी पार्टी सदस्यलाई संस्थापक सदस्य बनाएर घोषणा गर्न लागेको नेपालमा यो पहिलो पार्टी हो ।
नयाँ शक्ति नेपालका प्रवक्ता एवं प्रचार–प्रसार उपसमितिका संयोजक खिमलाल देवकोटाले दिनुभएको जानकारी अनुसार पार्टी घोषणामा देश तथा विदेशका नयाँ शक्तिका संस्थापकहरु सहभागी हुनेछन् । देशका ७५ जिल्ला र विदेशका २४ देशमा नयाँ शक्तिको अन्तरिम पार्टी कमिटी छ । घोषणासभामा विदेशका सबै कमिटीबाट सहभागिता रहने प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
देवकोटाका अनुसार पार्टी स्थापना तथा घोषणासभामा नयाँ शक्तिले विभिन्न २५ देशका राजदूत तथा कुटनीतिक नियोगलाई निम्ता पठाएइको छ । त्यसैगरी देशका सबै राजनीतिक पार्टीका प्रमुख नेता र सांसदलाई समेत निम्ता गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपासहित सबै मधेसी दललाई निम्ता पठाईसकिएको नयाँ शक्तिले जनाएको छ ।
यसैगरी पत्रकार, मानवअधिकारवादी, नागरिक समाजलगायत विभिन्न संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिलाई पनि निम्ता गरिएको प्रवक्ता देवकोटाले जानकारी दिनुभयो ।
रंगशालामा गर्ने कार्यक्रममा सहभागि हुन काठमाडौंका ४ मुख्य ठाउँबाट सहभागीलाई रंगशाला पठाउने व्यवस्था समेत पार्टीले मिलाएको छ । जसअनुसार कुपण्डोल, बबरमहल, कालिमाटी र रत्नपार्कबाट झाँकी सहितको जुलुस रंगशाला प्रवेश गर्नेछ । राजधानी बाहिरबाट आउने सहभागीले आफैं गाडीको व्यवस्था गरेर आएको खण्डमा ती बसहरु जुलुस सुरु हुने स्थानसम्म जान दिनेगरी
ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय भैरहेको पनि पार्टीले जनाएको छ । त्यसका लागि ट्राफिक प्रहरीलाई सहयोग गर्न नयाँ शक्तिले आफैं सडकमा खटिने युवा स्वयंसेवी तयार पारेको छ ।
प्रवक्ता देवकोटाका अनुसार नयाँ शक्तिको पार्टी घोषणामा मञ्चमा बस्ने व्यवस्था पाँच सय जनालाई मिलाईएको सो पार्टीको व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ । तर शुभकामना भने प्रतिनिधिमुलक ढंगले लिइने जनाईएको छ । कार्यक्रमको प्रचार प्रसारको लागि देश तथा विदेशका सञ्चार माध्यममा आवद्ध तीन सयभन्दा बढी सञ्चारकर्मीलाई पासको व्यवस्था मिलाईएको र छिटो समाचार पठाउन आवश्यकलाई ध्यानमा राखेर मिडिया सेण्टर समेत रहने प्रचार–प्रसार उपसमितिले जनाएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकः उपराष्ट्रपतिको चीन भ्रमण स्वीकृत
१५ सय प्रतिनिधिलाई बिरयानी खुवाउने नयाँ शक्तिको तयारी